DEG DEG: Duqeyn markale loo geystay Hadda Casmara & Jawaabta laga filan karro.
ASMARA(P-TIMES) – Madaafiic culus ayaa hadda laga maqlay markale magaalada Casmara ee caasumada Eritrea, waxana la maqlay hugun culus oo kale, waxaana ilaa hadda aan la aqoonin goobaha rasmiga ah.
Fiidnimadii caawa ayaa la weeraray xarumaha Wasaaradda Warfaafinta, Garoonka diyaaradaha iyo Saldhig Milateri, waxaana ilaa hadda dawladdu ma bixinin faahfaahin dheeraad ah.
Madaafiicda cusub ee hadda lagu qaaday markale caawa, waxay ka dhigan tahay in dagal rasmi ah ay xaaladdu isku rogtay ilaa hadda.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in la weeraray Xarunta Shirkada Isgaarsiinta ee Eritrea Telcom, waxaana walaac uu ka dhashay hubkan culus.
DAAN YEER DHICI WAAYEY LAAN ADAG BUU HAYSTAA; YAA IS GAARAY!
Waxa dad badani shaki ka muujinayaan in Masar iyo xulufadeedu ay dagaalka si qarsoodiya ugu jireen, weerarkan hadda lagu qaaday Ereteriyana waa janbool loo tuurayo si ay Ereteriya, oo awalba dagaalka si qarsoodiya ugu jirtay, ay si toos ah u soo gasho, si waddamo kale oo hadda isgaabinaya ay qiil ugu helaan in ay dagaalka si toos ah ugu soo biiraan; si kale haddii loo dhigana, waxa ay tani ku soo jeedinaysaa indhaha caalamaka.
Si kastaba, wiilkii Oromiga ahaa FASHIL buu caawa dhex fadhiyaa, kaarkii iyo biladihii la siiyeyna waaka gubteen, xukunkiisiina gabi buu ka laalaadaa. Waxaa intaa dheer, in Itoobiya ay gashay xaalad hubaal la’aan ah, oo u horseedi karta in ay noqoto tusbax go’ay sidii Soofiyeedkii & Yuguslaafiya. Isha ku haay.
Aan ku daree, waxaa is weydiin leh gantaalahan gaaraya illaa Casmara, yaa siiyey Tigreega?! Waayo Casmara iyo Mekele waa 1583 km, waa dhinaca dhulka. Su’aasha kale waxa weeye gantaalahani waa noocee, xawaare intee le’eg bayse saacaddii jarayaan? Hadday sidaa tahay, way garaaci karaan oo burburin karaan biya xireenka? Waxa aan aamminsanahay MASAR iyo SUUDAAN meeshan kama maqna.
Tigreyga waa qar iska ka tuur waxooda dhan. Bad ma laha, xadkooda waa Eritrea iyo Ethiopia iyo Sudan.
Dhinici Sudan waa laga qabsaday oo waxaa wada qabsaday Ethiopianki iyo Erireanki.
Hadda God beey ku jiraan waloow keyd badan oo hub, shidaal, raashin eey haystaan.
Meelkale looga soo gurmado ma jirto. Mar eey noqoto wey is dhiibayaan.
Dagaalkaan waxaa faa’ido ka helaayo qowmiyadda Amxaarada iyo Eritrea.
Oromiya ayagana arrintooda waxeey ku dhacday god dheer.
Soomaalida Ethiopia hadii eey aqli leeyahiin markuu dagaalaka dhammaado Oromo ha la saftaan si looga hortago xooga Amxaarada.
Soomaalida xorta ahna annagu horey ayaan dagaal ugu soo daalnay marka waa in aan iska tuurnaa Farmaajo.
Tigreyga Ayaa xaq ku dagaalaya waayo waxay difaacayaan habdhaqanka confederationka oo ah Habka kaliya ee lagu dhaqi Karo geeska Africa. Sadexda tuug ee madaxda ka ah Somalia,ethiopia iyo Eritrea way ku hungoobin sirta ay isku dhaarsadeen.